MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 821
> ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ မြစ်ကြီးဧရာဝတီ တေးသီချင်းများ စုစည်းမှု သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ၂၀၀ရ အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ မြင်ကွင်း စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ဖို့ မဲခွဲသတဲ့လား – ခေတ်ပြိုင်အာဘော် မျက်မှောက်ရေးရာ ဆောင်းပါးများ၊ ခံစားချက်များ သီးလေးသီးနဲ့ ဆေးရောင်စုံ ကောက်နုတ်ချက်များ ဦးပန်တျာ၊ နန်းဖောဆေး စီစဉ်သည် No tags for this post.
> မြန်မာပြည် နှင့် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးနိုင်ငံတခု သံအဆက်အသွယ် ပြုလုပ် ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ ဆဋ္ဌမမြောက် အသေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် Andorra နိုင်ငံနှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်လိုက်သည်ဟု တနင်္ဂနွေနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရသတင်းစာများက ဆိုသည်။ Andorra နိုင်ငံသည် ဥရောပတိုက်မှ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး စပိန် နှင့် ပြင်သစ် နယ်စပ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ အကျယ်အ၀န်းခန့်သာရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူဦးရေမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် တွက်ချက်မှုများအရ ရှစ်သောင်းကျော်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ No tags for this post.
> သီးလေးသီးနဲ့ မေရီလင်းပြည် မေငြိမ်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ သီးလေးသီးအဖွဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတခွင် လှည့်ပြီးဖျော်ဖြေဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ထွက်သွားပြီလို့ သတင်းကြားချိန်မှာ ကျမကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံဇင်းမယ်မြို့မှာပဲ ရှိနေတာပါ။ သီးလေးသီးနဲ့ ကျမ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ စတွေ့ခဲ့ကြတာ ဇင်းမယ်မှာပဲပေါ့။ သူတို့တွေ စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေးအပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ သူတို့အနုပညာကို ဖြန့်ဝေမယ်ရယ်လို့ ထွက်လာတာ။ ပထမဆုံးပွဲက စင်္ကာပူ။ ပြီးတော့ မလေးရှား။ ပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့။ ကျမတို့ရဲ့ ဇင်းမယ်မှာက စတုတ္ထပွဲ ပေါ့။ အဲဒီတုန်းကလည်း ကျမမှာ ပြေးပြေးလွှားလွှားနဲ့ ပွဲစီစဉ်ရတာ။ သီးလေးသီးပွဲကို ဇင်းမယ်ရောက် မြန်မာတွေ ကြည့်ရစေချင်ဇောနဲ့။ အဲဒီတုန်းက ဇင်းမယ်မှာ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက် ညနေ ၅...
> အင်တာနက်ပေါ်က ဖတ်စရာ အီးဘုတ်အုပ် အသစ် ၃ ခု စာဂျပိုး သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ ၈၈ မျိူးဆက်ကျောင်းသား ကိုအောင်ထွန်း ပြုစုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း (၁၉၀၃ – ၁၉၉၁) စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် (နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မီတီ)က ပြည်ပမှာ ဖြန့်ချိပါတယ်။ တန်ဖိ်ုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၊ အုပ်ရေ ၅၀၀။ ယခု အီးဘုတ်အုပ်အဖြစ် မေတ္တာဖြင့် ဖြန့်ချိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး နှင့်သူ၏ကဗျာများ – နေခြူး၊ တင်မိုး ။ ကဗျာဆရာကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရအဖြစ် မိုးချိုသင်း အင်တာနက်ဘလောက်က တင်ဆက်တဲ့...
> မိကျောင်းများ ပြည်ပပို့ခွင့်မပြုXinhua သတင်းဌာနဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ကင်မရာကို ပြုံးပြနေသော သာကေတ မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းမှ မိကျောင်းတကောင် မြန်မာအစိုးရက မိကျောင်းမျိုးသုန်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားသည်ည်ဟု မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားလိုက်ကြောင်း ရန်ကုန်တွင်ထုတ်ဝေသည့် Voice ဂျာနယ်တွင် ရေးသားထားသည်။ မြန်မာ့မိကျောင်းများသည် ကမ္ဘာ့ မျိုးသုန်းတော့မည့် တိရိစ္ဆာန်များစာရင်းတွင် ပါဝင်သောကြောင့် ပိတ်ပင်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ မျိုးသုန်းတော့မည့် တိရိစ္ဆာန်များ နှင့် အပင်များ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၏ ခွင့်ပြုချက်ရမှ ရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိမည်ဟု သိရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိကျောင်းမျိုးစိတ် ၂၃ မျိုး ရှိသည့်အနက် မြန်မာပြည်တွင် ၄ မျိုးကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ငမိုးရိပ်မိကျောင်း၊ အင်းမိကျောင်း၊...
> နောက်ဆုံး ခံတပ် အိုးဝေမျိုး (ပုရစ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ တတိယမီးကျည် ပစ်တော့မယ် သူငယ်ချင်း … ငါ ရောက်ခဲ့တယ်လေ … တကယ်တော့ အခန့်မသင့်ရင် ကျွံကျ သွားနိုင်တဲ့ ရေစီးရေလာလည်း အသင့်အတင့်ကောင်းတဲ့ မြောင်းဖုံးတွေပေါ် … ခင်းထားတဲ့ လမ်းတွေပေါ် မရဲတရဲ နင်းရတာလည်း ရင်ခုန်စရာပါပဲ မြို့ကလေးရေ။ မြို့ကလေးရေ … သည်ဘက်ခေတ်ရဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်မှာ မင်းက ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကို မြိုချခဲ့ ပြီးပြီလဲ မြို့ကို မြိုချလိုက်တဲ့ လူတိုင်းတော့ မပြယ်တိုင်း မူး မူး သွားခဲ့ပေါ့ … ဥတုဘောဇနကျမ်း အလိုအရ မတွက်ချက်မိတဲ့ ငါ့ရာသီဟာ သာသာယာယာ ကြည်ကြည်လင်လင် မူးလို့ ဝေလို့...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၄) ၁၆ ကြိုးတပ် စောင်းမာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၉ “ – – ရှေးက လက်ကျန် ဂီတ မိခင်ဖခင်တွေ ဆုံတတ်ကြတဲ့ ‘ဆိုတီးစားပြန်’ ပွဲဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေတုန်းကတော့ အချင်းချင်း ပညာ ဖလှယ်ကြသလို ပြန်နွှေးကြ ညှိကြ ဆိုတီးကြ – – -”သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်တုန်းက ဗေလုဝ နတ်စောင်းကြီးရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ဟာ မာရ်နတ်ကြီးဖြစ်တယ်၊ ပဉ္စသီခနတ်သားက ဗေလုဝရွှေစောင်းကြီးကို ငွေစောင်းကြိုး ခုနှစ်ကြိုး တပ်ပြီး တီးခတ်တယ်လို့ ‘မဃဒေဝ’ က...
> ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ အားကစားသတင်း ဝင်းလက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၉ မိုက်ကယ်ဖေးကို ပြောင်လှောင်နေကြသော လူရွှင်တော်နှစ်ဦး မိုက်ကယ်ဖေး တရုတ်နိုင်ငံအား တောင်းပန်စကားဆိုအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်များပိုင်ရှင် ရေကူးချန်ပီယံ မိုက်ကယ်ဖေးသည် မိမိ၏အပြုအမူအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား အနူးညွှတ် တောင်းပန်လိုက်သည်။ မိုက်ကယ်ဖေး ဆေးတံဖြင့် ဆေးခြောက် သောက်သုံးနေပုံကို ဗီဒီယို မှတစ်ဆင့် တကမ္ဘာလုံး မြင်တွေ့ရ၍ အံဩခဲ့သည်။ ယင်းအဖြစ်ကို အားကစားရေးဆိုင်ရာများက မျိုးဆက်သစ် အားကစား သမားများ လမ်းမှားရောက်အောင် ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဝေဖန် ပြစ်တင်ကြသည်။ မေဝဲသာ လက်ဝှေ့ ချန်ပီယံဟောင်း မေဝဲသာ အနားယူWBC light weight ချန်ပီယံဟောင်း မေဝဲသာ သည် လက်ဝှေ့လောကမှ အပြီးအပိုင် အနားယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။ ‘ကျနော်...
> ရိုဟင်ဂျာ အရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာ ရောဂါ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သန်းစိုးလှိုင် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၉ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ၅ နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်န၀ါရီလက စတင်လိုက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဟာ တလ နီးပါးကြာလာသည် အထိ အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ၊ ထိုင်းအစိုးရနှင့် စစ်တပ်အကြား၊ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ အကြားမှာ ရေရာတဲ့ အဖြေ တခု မရသေးတဲ့ အပြင် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှု တခုအဆင့်တောင် ရောက်ရှိမလာသေးပါဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေကို ပင်လယ်ထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက လတ်တလော နေစရာ၊ စားစရာ ထောက်ပံ့ထားသော်လည်း ဒုက္ခသည် စခန်းဖွင့်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တခု ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။ ထိုအထဲမှာ...
> နောက်နေ့ကျမှ ဆက်ပြောကြရအောင် သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ တသက်လုံး ချိုးထောင်၊ ခါနှိုက် လုပ်လာတဲ့ကောင် စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့နေ့မှာ ငှက်လွှတ်မယ်။ အရုဏ်ဦးမှာ ချစ်စွာသော ကြာပန်းရနံတို့ဖြင့် မွှေးပျံစွာ ဘုရားပန်းတင်မယ့် လက်များ အရာရာဟာ လျာထားချက် ထဲမှာပဲ ရှိသေးတယ်။ တောက နက်လွန်းတော့ ခြေင်္သေ့ ရှိတယ် ခွေးအ ရှိတယ် လင်းယုန်လည်း ရှိတယ် လင်းတလည်း ရှိတယ်။ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား မဖြစ်လည်း ကမ္ဘာကြီးရဲ့အရေပြားပေါ် ဆေးမင် ထိုးခဲ့တယ်။ အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးနဲ့ ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေ မဖြတ်ဘူးပေမယ့် ဘတ်စ်စကားကြီး တစင်းထဲ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲ တိုးဝင် အိမ်ပြန်ချင်တယ်။ … ကမ္ဘာစစ်နှစ်ခုနဲ့ ညားခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် မုဆိုးမ… မြစ်ကူး ချောင်းခြားတောင်...
> စောဝေနေ့ ၀င်းပေါ်မောင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ မောင် … မနက်ဖြန် `ချစ်သူများနေ့´နော် အမှတ်တရ ဘာပေးမှာလဲ ပြော ညနေကျရင် အပြင်မှာ တခုခုသွားစားမယ်နော် … ဟင်… မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်သိတာ `စောဝေနေ့´ပါ `ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်လေး´ ကဗျာ အဲဒါ သူရေးတာလေ။ ချစ်သူတွေအကြောင်း ရေးရင်း မချစ်သူတွေအကြောင်း ပါသွားလို့တဲ့ ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ကျခံစေတဲ့ မချစ်တတ်သူတွေက စီရင်လိုက်တာလေ။ ကိုယ်တော့ မထင်ပါဘူးကွယ် မချစ်သူတွေအကြောင်း ရင်ထဲမှာ ထားစရာ နေရာမရှိလို့ ကဗျာထဲ ၀ှက်ထားမိတာ ထင်ပါရဲ့။ ကိုယ်တို့က ဘယ်အရာမဆို သိုသိုသိပ်သိပ် လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် နေရတာ မဟုတ်လား။ တကယ်ဆို ချစ်သူတွေ အကြောင်းလည်း ရေးလို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူးလေ...
> စံမင်း၏ လက်နက်ပြပွဲဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ပြပွဲတွင် တွေ့ရသော ပန်းချီစံမင်း ပန်းချီစံမင်း၏ တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲကို ယနေ့ညနေပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ သုဝဏ္ဏဘူမိပန်းချီပြခန်းတွင် စတင်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ ပန်းချီကားချပ်များအားလုံးတွင် လက်နက်များကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည်။ (photo: Naw Kabaw Shee) No tags for this post.
> ကုလသမဂ္ဂအရာရှိ အင်းစိန်ထောင်သို့ သွားမည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ချက်ချင်းလွတ်ပေးရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲမှ မြန်မာကလေးငယ်တဦး။ (Photo:AP) ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်သို့ ဒုတိယအကြိမ် ရောက်လာသူ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ သောမတ်စ် ကင်တားနားသည် အင်းစိန်ထောင်သို့ မကြာမီ သွားရောက် စစ်ဆေးမည်ဟု AFPသတင်းဌာနက ဆိုသည်။ အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းရောက်မလာမီ ၁ ရက်အလိုတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးကို ထောင် ၁၅ နှစ်စီ ချလိုက်သည်။ မကြာသေးမီကလည်း နိုင်ငံရေးသမားအများအပြားကို လျှို့ဝှက်တရားရုံးများတွင် ထောင်ဒဏ်များ ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကင်တားနားသည် မနက်ဖြန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်သို့...
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (အပိုင်း ၅)‘၁၉၃၈ တတိယ တက္ကသိုလ် သပိတ် ၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံ’အောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ၁၉၃၆ တက္ကသိုလ် ဒုတိယ သပိတ်ကြီး အပြီးမှာတော့ နဂိုမူလ ကဒေါင်းအလံတွေ နေရာမှာ ရဲရဲနီတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ အစားထိုး လွင့်ပျံလာခဲ့ပါပြီ။ ၃၆ သပိတ်ကြီးက မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ ‘ဗကသ’ ABSU ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ခွပ်နေတဲ့ဒေါင်းပုံရေးဆွဲပေးဖို့ တောင်းဆိုလို့ ကာတွန်းဦးဘဂျမ်းက ခွပ်ဒေါင်းပုံ ရေးဆွဲပေးခဲ့တာ လို့ ဆိုပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကို ‘က’ ပြီးတော့ မယူဘူး၊ ‘ခွပ်’ပြီးတော့ ယူမယ် ဆိုတဲ့ ခွပ်ဒေါင်း စိတ်ဓာတ် အစဉ်အလာက အဲဒီ အချိန်ကတည်းက...
> ချစ်သူများနေ့ကို နိုင်ငံတကာတွင် ကျင်းပ ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ကို ချစ်သူများနေ့ (Valentine’s Day) အဖြစ် နိုင်ငံတကာတွင် သတ်မှတ် ဆင်နွဲနေကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရောင်းဆိုင်တခုတွင် ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ် ကတ်ပြားများရွေးချယ်နေသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးအချို့။ (photo:AP) အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ရှိ သဘောထားတင်းမာသည့် ဟိန္ဒူဘာသာရေးအုပ်စုတခုက ချစ်သူများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပို့စ်ကတ်များကို ယမန်နေ့က မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပုံ။ (photo: Reuters) ကနေဒါနိုင်ငံ၊ Nova Scotia ပြည်နယ်၊ Halifax မြို့တော် ကုန်တိုက်တခုတွင် ချစ်သူများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သော အနမ်း ပြိုင်ပွဲတွင် တွေ့ရသော ပြိုင်ပွဲဝင်စုံတွဲများ နှင့် ဈေးဝယ်သူအချို့။ နောက်ဆုံးကျန်ရှိသော...
> သတ္တုကွင်းတပ်ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာလူငယ်များထံတွင်လည်း တွေ့ရဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဖောက်ပြီး သတ္တုကွင်းတပ်ထားသော ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာပြည်သား လူငယ်တဦး။ သူနှစ်သက်သော အမေရိကန် ခေတ်ပေါ်တေးဂီတ ပညာရှင်တဦး၏ ပုံစံအတိုင်း နှုတ်ခမ်းဖောက်ပြီး အလှဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ လူငယ်က ရှင်းပြသည်။ ထို သတ္တုကွင်းကြောင့် အစာစားစဉ် အနှောင့်အယှက် မရှိသော်လည်း မျက်နှာ သန့်စင်သည့်အခါတွင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့် သတ္တုကွင်း ငြိပြီး နာကျင်သောကြောင့် သတိထားရသည်ဟု ဆိုသည်။ သတ္တုကွင်းကို ဖြုတ်ပြီး သူ၏ နားပေါက်တွင် တပ်ဆင်လိုက်ခြင်းကိုလည်း စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ (photo: Moemaka) No tags for this post.
> ဦးသန့် ရာပြည့် (တံဆိပ်ခေါင်းများ) ဦးအုန်းကျော်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ “ဒို့ ဗမာနိုင်ငံသား – ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့် အတွက် နှစ်တရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်တဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းတွေ၊ ငါ့တူကို ပြရမယ်ကွ။ “အဲဒါတွေ ကြည့်ချင်လွန်းလို့ ဘယ်သူငယ်ချင်းဆီမှ မဝင်ဘဲ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင် ဝင်မထိုင်ဘဲ ဦးလေးဆီ တန်းလာခဲ့တာပဲ ဦးလေးရာ။ တံဆိပ်ခေါင်းတွေ ထုတ်မယ် ဆိုတာကတော့ – အင်တာနက် ဝက်ဆိုက်တွေက တဆင့် ကျနော်တို့တတွေ သိပြီးပါပြီ။ ဦးသန့်ရဲ့ အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ကိုလည်း သိကြပါပြီ။ “အေး အေး ကောင်းတယ်။ မင်းကို ဦးလေးက – မိုးလင်းကတည်းက မျှော်နေတာ။ မင်းသူငယ်ချင်းတွေတောင် ပါမယ်...
> မြန်မာပြည်၏ နောက်ဆုံး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၄ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးဖိတ်စာတွင် ဆဋ္ဌသံဂါယနာ ပဓာန သာသနာ့ ဒါယကာကြီး ဟု ဖော်ပြထား မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ ပဏ္ဏိတာရမ ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ ရိပ်သာတွင် ကျန်ရစ်သူ သမီး သန်းသန်းနုနှင့် ဦးနုတပည့်များက ၁၉၆၂ မတိုင်မီ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း၊ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းကာလက ကြားဖြတ်အစိုးရ ကြေညာခဲ့သူ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၏ နယကကြီးဖြစ်သူ ဦးနု ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၄ နှစ် ပြည့် ဆွမ်းကျွေး အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းသူ၊ သာသနာပြုသူဟုလည်း ခံယူသူ...
>Zarganar and his college removed from sentence by Electronic Act
> နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထောင်တွင်း စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်နေဟု သတင်းထွက် ကိုဇာဂနာနှင့် မိတ်ဆွေများကို အီလက်ထရွန်နစ်အက်ဥပဒေ ထောင်ဒဏ်များ ရုပ်သိမ်း မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ရပ်ဝေးဒေသရောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများထံသို့ မိဘသားချင်းများ သွားရောက်တွေ့ဆုံရန် အခက်အခဲများ တိုးမြှင့် ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ အချို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ဆိုင်းငံ့ သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းပြစ်ဒဏ် (၄၀၁) သဘောတူ လက်မှတ် ထိုးခိုင်းနေသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာနေသည်။ ရှေ့နေက အယူခံတင်ပြသဖြင့် ပြည်သူ့အနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာနှင့် မိတ်ဆွေများအပေါ် အီလက်ထရွန်နစ် အက်ဥပဒေအရ ချမှတ်ခဲ့သည့် ထောင်ဒဏ်များကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ရှေ့နေ၏ အယူခံတင်ပြချက်ကို တိုင်းတရားရုံးက လက်ခံစဉ်းစားပြီး အီလက်ထရွန်နစ် အက်ဥပဒေ စွဲချက် ၁...
>NLD statement on Burma Union Day on 12th Feb 2009
> အင်န်အယ်ဒီပါတီ ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပ ပြည်ထောင်စုနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂တွင် ပြည်ထောင်စုနေ့ကို လည်းကောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ (မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးများနေ့)ကို လည်းကောင်း ရန်ကုန် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ ပါတီဌာနချုပ်ရုံးတွင် အင်န်အယ်ဒီပါတီက ကျင်းပခဲ့သည်။ ကလေးပန်းချီပြိုင်ပွဲ၊ မိန့်ခွန်းပြော ပြိုင်ပွဲ၊ သီချင်းပြိုင်ပွဲ၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပသည်ဟု ဆိုသည်။ အင်န်အယ်ဒီက ပြည်ထောင်စုနေ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာတွင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော် ခေါ်ယူနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ လွတ်လပ်စွာ...
>Maung Yit – No Electronic Act if there’s no Electricity
> Cartoon Maung Yit – Electricity & Electronic Act of Burma In Burma, even without “Electricity”, the Junta use “Electronic Act” to send Burmese into Prisons.February 13th, 2009 No tags for this post.
>generals extend detention of Tin Oo
> ဦးတင်ဦး အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းတိုးခံရ၊ ဒေါ်စုလည်း လွတ်လမ်းမမြင်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၆ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉ ဦးတင်ဦး(photo: Alt-Asean 1998) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း တင်ဦး၏ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ၅နှစ်ပြည့်သည့်နေ့တွင် အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းအား သက်တမ်း ၁ နှစ် ထပ်မံတိုးချဲ့ ချုပ်နှောင်လိုက်သည်ဟု ရန်ကုန်မှ လာသည့် အေပီသတင်းတပုဒ်က ဆိုသည်။ဦးတင်ဦးသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ က သူ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ချုပ်၏ မော်တော်ယဉ်တန်းသည် ဒီပဲယင်းမြို့ပြင်ရှိ အင်အား ၅၀၀၀ ခန့်ရှိသော လူအုပ်ကြီး၏ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရသည်။ ဦးတင်ဦး နှင့် ဒေါ်စုသည် ထိုအချိန်မှစပြီး အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဒေါ်စုက...
>remembrance of Pado Mahn Sha
> ပ ဒို မန်း ရှာ သို့အောက် မေ့တ သ ချက်အောင် ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉ သောင်ရင်းကပြောင်းပြန်စီးလို့ ရတယ်။ နွေဦးကတည့်တည့် မလာလို့မရဘူး။ မာနယ်ပလော ကျဆုံးတာကလည်းစောတယ်ဖထီးရေဖထီး ကျဆုံးတာကလည်း စောတယ်။ အမြဲနောက်ကျတာကတော့အဲသည် နွေဦးပဲ။ မဲဆောက်ကနေ မာလာဟိုက်အထိနွေဦးမျှော်ယိမ်းတိုက်နေတာခုထိ မညီသေး။ အရေးထဲသီချင်းက အသံတိတ်လွန်းရဲ့ သံကုန်မြှင့် အော်ကြည့်လိုက်ပါလား။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်ပါသည်။ ။ ၁၂-၂-၂၀၀၉ No tags for this post.
>Dagon Tayar is leaving for Aung Ban
> ဆရာဒဂုန်တာရာအား ဂါရ၀ပြု နုတ်ဆက်ပွဲတာရာဝေယံဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉“ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိမုန်းသူမရှိ၊ ချစ်သူသာရှိနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်တာ”ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အယူအဆကို စွဲမြဲစွာ ခံယူထားတဲ့ ဆရာ ဒဂုန်တာရာဟာ ရန်ကုန်မှာ ဆောင်းခိုရင်း နွေဦးပေါက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာနေထိုင်ရာ အောင်ပန်းမြို့ကို ပြန်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ကို လေးစား ချစ်ခင်ကြတဲ့ စာပေနဲ့ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များက ဂါရ၀ပြု နုတ်ဆက်ပွဲတခုကို မနေ့က နံနက်ပိုင်းက စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နုတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်ကြတဲ့ နေရာကတော့ သံလျင်မြို့ ထန်းပင်ကုန်း ၇ လမ်းက စာပေမိတ်ဆွေတဦးအိမ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဦးအံ့မောင်က အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများက တဦးချင်းစီ မိတ်ဆက်ကြပါတယ်။ ဆရာဒဂုန်တာရာက ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ခေတ်သမိုင်းပုံရိပ်များနဲ့...
>ABFSU (FAC) – Honoring Bogyoke Aung San
>AungSan94.PDF Publish at Scribd or explore others: Other Brochures & Catalogs leader myanmar No tags for this post.
>Burmese Journal Digest – Feb 12, 2009
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ ကြက်ခြေနီအသင်းများက နာဂစ်မိသားစု ၃ သောင်းကို ထောက်မည်။ စင်္ကာပူ ကျောင်းသားဗီဇာ ၅၀ % အပယ်ခံရ။ ကုန်သည် စက်မှု အသင်းချုပ် နာဂစ်အတွက် ကျပ် သိန်း ၆ သောင်း လှူခဲ့။ ရန်ကုန်စည်ပင်က စက်မှုဝန်ကြီး(၂)က အုတ်စက်ကို ၀ယ်ယူ။ စာပေလောက စာအုပ်ဆိုင်များတွင် စာရေးဆရာများက ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုး ရောင်းချ။ တခါသုံး GSM ကတ် ၈ သောင်း ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး။ ၂၀၀၇ အကယ်ဒမီ မြင်ကွင်း။ ရန်ကုန်စည်ပင်က လမ်း ၁၀၀၀ ကို ကတ္တရာခင်းမည်။ မြန်မာပြည် HIV...
>Thit Kaung Ein – Aung San
> အောင်ဆန်းသစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ အမေ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်ထဲက ကျနော့ရဲ့ ရော်ဘင်ဟု အမှန်တရားအားလုံးရဲ့သေနာပတိ ရုပ်တုထု ကိုးကွယ်ရမယ့် ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ တဆူသောဘုရား ၀ိမုတ္တိတရားဦးကို ဟောဖို့ ဥရုဝေလတောကို သူလာခဲ့တယ်။ ။ (၁၁.ဖေဖော်ဝါရီ. ၂၀၀၉) No tags for this post.
>Myat Kaung – Salute to Bogyoke Aung San
> အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ အမှတ်တရမြတ်ကောင်းရဲ့ဒီဇိုင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉ “လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အထူး မေတ္တာရပ်ခံသွားချင်တယ်။ လူငယ်တွေဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘယ်လောက်လုပ်တယ် ဆိုတာလည်း လူအများအပြား သိကြတာပဲ။ လူကြီးတွေဆိုတာလည်း ဒီတိုင်းပြည်မှာ အတော်ပဲမရှိကြတော့ဘူး။ လူငယ်တွေရဲ့ခေတ် ရောက်လာပြီ။ မိမိတို့ခေတ် ရောက်လာတဲ့အခါ မိမိတို့ဟာ မိမိတို့ ရှေ့က နိုင်ငံရေးသမားများ မှားသလို မမှားကြတော့ဘဲ၊ နည်းသစ်၊ အလုပ်သစ်၊ စိတ်သစ်၊ နိုင်ငံရေးသစ်ကို လုပ်ဖို့ အထူးသတိပြုစေလိုပါတယ်။ တဦးနဲ့ တဦး ဝေဖန်လွန်းအား မကြီးပါနဲ့။ ရှေ့ကိုလည်း သိပ်လောမကြီးပါနဲ့။ သိပ်လောကြီးရင် စစ်ကျွံသလို ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ” ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရား အလယ်ပစ္စယံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၁၉၄၆ No tags...
> လမ်းပြမြေပုံကို ဂန်ဘာရီနှင့် ဂျပန်ထောက်ခံ၊ မော်လဒိုက်သမ္မတ ကန့်ကွက်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၄ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန်ပိုင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာဏာရပါတီ ကွန်ဂရက်ပါတီအကြီးအကဲ ဆိုနီယာဂန္ဒီနှင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေသော မော်လဒိုက် သမ္မတ Mohamed Nasheed (အသက် ၄၂ နှစ်) (ဓာတ်ပုံ – ရိုက်တာသတင်းဌာန) ရှေ့နှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်ကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်လျှင် နိုင်ငံတကာက ထောက်ခံလိမ့်မည်ဟု ဂျပန်အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီတို့က ယနေ့ ပူးတွဲ ကြေညာလိုက်သည်။ မစ္စတာ ဂန်ဘာရီသည် မြန်မာပြည် ၄ ရက်ခရီးစဉ်အပြီးတွင် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ပြီး ယခု ဂျပန်တွင် ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်တွင် ရောက်ရှိစဉ်...
> အမှတ်တရ ဗိုလ်ချုပ် (၁၉၁၅-၁၉၄၇)မာမာအေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ “ကိုးဆယ့်လေးနှစ်”ပြည်ချစ်‘ဖခင်’ရှိခဲ့ရင်ပေါ့။ ဖခင်ရယ် – –နယ်ချဲ့လက်ဝေသက်ချွေခဲ့စဉ်ဖလ်တွင်လျောင်းစက်အိပ်ပျော်လျက်သို့တသက်သည်ခါမြင်ဖူးပါလည်းမေတ္တာစင်လူးကျေးဇူးဂုဏ်အင်တွေးတိုင်းတင်မို့ဖခင်စံပြ‘ဗိုလ်တေဇ’လေ။ ဂီတအသည်းအကျည်းတန်မနှလုံးလှမယ်ကိုးကွယ်‘ငြိမ်းချမ်း’‘ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်’‘ဖလမ်းစဉ်’ ကြားခရီးသွားခဲ့၊ အားမနွဲ့။ လှုပ်လဲ့လှုပ်လီရင်ချီခါးသေးလှဆေးမဖော်မတော်တာတွေ့‘ဒေါင်းဓလေ့’နှင့်ကောင်းစေ့ချင်တိုင်းနှုတ်ရိုင်းမိမိ‘ဖသို့ရှိ’ခဲ့။ ‘ဖ’ မရှိလည်းရှိသည့်အလားထွန်စေနွားသို့တိုင်းကားပြည်မှုပြည်ထောင်စုနှင့်လူထုထဲမှာမေတ္တာအိမ်ဆောက်တယောက်ထီးတည်း‘ဖေကြီး’နောက်ပါးဇာနည်ဘွားလေးလိုက်ပေးတုန်းခါ‘မကွေး’မှာလေ။ သေတောင်မေ့ဘူးအဖြစ်ထူးကဲဖွင့်ဆဲ‘ကြေးရုပ်’‘ဖ ဗိုလ်ချုပ်’ကား‘ခလုတ်’လက်တင်မနှိပ်ခင်ကချိုမြငြိမ့်ညောင်းဆရာ့စောင်းဖြင့်ဂုဏ်ပေါင်းဇေယျာခစိမ့်ငှာလျှင်လင်္ကာရတုတေးနုသံလွင်ဝေဟင်ပျံဝဲဆိုဆဲကာလသမီးလှအားသနားပိုင်ပိုင်မစောင့်နိုင်ဟန်အားမာန်အပြည့်ထွက်ကြည့်သယောင်ကြံဆောင်ဖြစ်ခြင်းသည်အခင်းကိုခပင်ရှင်လူအူအူသောသောမိန်းမောနှုတ်ဟအမှတ်ရကြောင်းထပ်လောင်းတသ လွမ်းလိုက်ပါ့။ ။ ၉-၂-၀၉ တနင်္လာနေ့ မွန်းလဲ ၂း၅၁ နာရီ၊ ဖို့ဝိန်း၊ USA No tags for this post.
Page 821 of 889«1...819820821822823...889»
>9th Jan 2011 - MoeMaKa Radio